Tsy faly i Sina · Global Voices teny Malagasy
Tsy faly i Sina
Voadika ny 16 Avrily 2009 17:02 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, বাংলা, bahasa Indonesia, English
Song Qianga （中國可以說不), iray amin’ireo mpanoratra be mpividy indrindra tamin'ny 1996 Afaka miteny Tsia i Sina（中國可以說不）, dia namoaka boky vaovao, Tsy faly i Sina (中國不高興）, miaraka amina mpanoratra malaza hafa. Ny boky voalohany dia nivoaka taorinan’ny fandarohana baomba ny kaonsily jeneralin’ny Sina tany Yougoslavie nataon'ny OTAN izay nampisafoaka ny mponina Sinoa ary nitarika fihetsiketsehana nasionalista nanao tohivakana manohitra ireo firenena tandrefana. Tamin’ity indray mandeha ity, ny boky dia navoaka tamin'ny faha enimpolo taonan’ny nanorenana ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina.
Ilay vondrona iraisan'ireo mpanoratra dia ahitàna olo-malazan’ny fampahalalam-baovao, ireo mpikirakira ny kolontsaina sy ireo avy amin'ny Anjerimanontolo:
Song Qianga（宋強）, iray amin’ireo mpanoratra “Afaka miteny Tsia i Sina”, dia manana ny haizatran'ny mpanao gazety, toniam-pamoahana sy fanoratana tamina fahitalavitra.
Song Xiao Jun （宋小軍）dia mpanolotra fandaharana ao amin’ny fahitalavitra CCTV sy ny Phénix T.V., izy no lehiben’ny fihetsiketsehana nationalista, ary nahazo fiofanana ara-miaramila.
Wang Xiaodong （王小東） dia nalefa tany Japana mba handalina momba ny fitantanana orinasa taorian’ny nanapahany hevitra hampiato ny fianarany momba ny matematika tany amin’ny Anjerimanontolon’i Pékin. Izy dia malaza noho ny tsikerany amin’ny « fanavakavahana mivadik'ondana ara-pihaviana » (逆向種族主義）, izay midika ho fitsikerana ny tena ataon'ny Sinoa amin'ny fomba fitondran-tenan-dry zareo izy samy izy ihany.
Liu Yang （劉仰）dia mpanao gazety manam-pahaizana manokana amin'ny lahatsoratra manodidina ny kolontsaina, ny tantara ary ny toekarena.
Mizara ho antokony telo ny boky :
« Fa maninona Sina no tsy faly? » « Ny fangatahan’i Sina »sy ny« Adinoy ny Bouddha kely fa farito ny tetik’asa lehibe » (Bouddha kely dia maneho ny fahatsaran’ny toe-po “bonté du cœur”). Douban dia
mamintina ny votoatiny:
Fa maninona i Sina no tsy faly?
– Misy matoatoa ao ambadik'ireo zava-nitrangan’ny Lhasa tamin’ny 14 martsa 2008, ny fangejana ara-stratejika ataon'ny Tandrefana amin'i Sina dia lasa miharihary sy tsy takona afenina.
– Ny ronono Sanlu nisy poizina dia nahatonga «fahaketrahana ara-psikolojika » teo amin'ny ankamaroan'ny mponina Sinoa. Tena loza mananontanona ny sata fototra iorenan'ny firenena matanjaka iray izany.
– Ireo olona toa an-dry Nicolas Sarkozy dia nisetrasetra tamin'i Sina tamin’ny fanaovana teny masiaka tsy voahevitra (masiso).
– Ireo ambara ho «tampom-pahaizana» na « ireo sinoa sangany» dia vato misakana ny toe-panahy nasionalintsika.
Tokony hanazava ny amin'ireo « Fa maninona » sasantsasany i Sina
– Fa maninona ny fahatsapana fahamboniana amin'ireo mponina sinoa no ambara fa fahatsapana diso. Ary ny teti-panoron'ny Tandrefana, izay mitondra antsika hikororosy hidina ambany no atao toy ny areti-mandoza afenina any Sina.
– Fa maninona no tokony ho raisintsika toy ny safidy iray ho an’i Sina ny fanapahana ny fifandraisana amin’ny Tandrefana arahina fepetra vitsivitsy .
– Fa maninona ny kolontsain'ny«andry faha-dimy» (5ème colonne) (amin’ny hevitra hoe vondrona mpanakorontana manohana ny fahavalo ary ny « mpamadika ») no manjary mihazakazaka izay tsy izy ?
– Fa maninona ny “eritreritra hitondra fanovàna” ary ” ny eritreritra hanavotra tontolo”, ny “néo-confucianisme” no lasa toy ny teniteny foana tsy misy dikany?
– Fa maninona ny nofinofin'i « Wang Xiao bo », izay mifikitra mafy amin'ny “défaitisme” no ny kolontsain'ny lainga faran'izay tena ratsy.
Inona no toro-hevitra tena tokony haroso an'i Sina?
– Sina dia tokony ho lasa firenena filamatra
– Mitana ny sabatsika mba hiarovana ireo fandraharahantsika, làlana iray hananganana firenena matanjaka izany.
– Ny Tafi-Panafaham-Pirenena dia tokony hanaraka ara-bakiteny ny sata ankapoben'i Sina.
– Tsy tokony hihaino ny resaka mampandry adrisan’ireo « mpiantafika ara-toekarena » isika, ny fanondrotana ny indostria no voalohan-daharana.
– Fantatra ny endrika «roulette russe» isaloran’ny tetika diplaomatikan'ny Tandrefana, mampihena ny fifandraisana diplomatika amin’ny Frantsa.
– I Sina dia tokony ho sahy amin'ny fiarovana ny fandriampahalemana iraisam-pirenena ary manomana làlana sahady mba ho tonga firenena matanjaka
– Misoroka ireo beaux arts izay mikiky ny fiainana ara-tsosialintsika , na raha tsy izany tsy afaka mampanaraka ny toetr'andro ny tanjona ara-politika sy ara-ekonomikantsika isika.
Ao amin’i Douban (fiaraha-mientana tsy miankina, anaty vohikala), hevitra roa be mpandala indrindra no nitondra fanamarihana mafonja momba ny boky :
abing dia miteny hoe: :
Ny votoatin'io boky io dia tena tsotra. Manaraka ireo kabary tsara lahatrin'ny “Afaka miteny tsia i Sina” izy , mamariparitra amin'ny fomba vaovao ireo olana ara-piarahamonina sasantsasany amin'izao fotoana, ary dia mahita hirika vitsivitsy ho enti-manenjika ny Southern Weekend, Jian Zhong Shu, Wang Xiao BO. Izy io dia miteny amintsika fa efa tsara i Sina, aza manao manaratsy tena ianareo, aza manaiky ho gejain'ny olana anatiny ianareo, ny Tandrefana dia tigra natao tamin'ny taratasy fotsiny ihany. Inona ny ankoatra izay? Tsy misy zavatra hafa intsony.
Indray andro i Li Ao dia nilaza fa ny ao an'eritreritry ny KMT dia «i Sina rehefa manaitaitra ny filany ara-nofo amin'i Taiwan» izy. Ankehitriny, ireo fomban-drazana nireharehana dia lasa any amin’ny Tany Lehibe (Sina) ary niofo ho “fieritreretana an'izao tontolo izao rehefa manaitaitra kosa an'i Sina”.
Ny Representatives are crazy dia mampitovy ny boky amin'ny taratasy fitondra any amin'ny toeram-pivoahana :
Leazaaa! tsy mbola nahita taratasy fifirana lafo vidy tahaka ity aho.Vitsy loatra ny isan'ny pejy ary ny lafo loatra ny vidiny, ity no tena lafo indrindra amin'ireo taratasy fifirana rehetra, nefa tsy misy fahafaham-po azo aminy:
2. Mafy loatra ny taratasy, ary manela fotoana be ny mifitra aminy. (Ankoatra izany, manaraka ny lokony…)
3. Tsy mitroka rano sy tahaka izany ilay taratasy.
4. Ny teny eo aminy dia fanairana filàna (mahadangitra) rehefa mifitra aminy. Tsy ara-pahasalamana ho an'ny filahiana ny midona amin’ ny kovetan'ny toeram-pivoahana.
5. Miangitraingitra loatra sy tsy manaja ny tontolo iainana ny fonon'ilay taratasy fifirana .
6. Misy mpandraharaha very fanahy manao ny volan'ny olona ho tsy misy vidiny amin'ny famarotana itony taratasy fifirana tsy misy dikany itony.
7. Tsy mba mihodina boribory ilay izy, tsy mety amin'ny fitoeran-taratasy fifirako.
8. Tsy faly momba azy ity ny mponina Sinoa .
Nefa na izany aza, misy mpitoraka blaogy mindrana ity boky ity. Bian-zhou Yi-ye, mbola avy ao amin'ny Douban ihany ary manaiky ny fanazavan-kevitra entin'ny boky momban'ny fanavakavahana mivadik'ondana ara-pihaviana ary niteny hoe :
Ny olana tena goavana atrehin'i Sina dia maro ireo sangany no manimba miandàlana ny toe-tsaina ambonin'ny firenentsika. Tsy afaka ho matanjaka sy ho lasa mpitarika ny tany ny Sinoa iray miaina anatin'ny psikolojian'ny fiforetana . Ny Tsy faly i Sina dia tonga amin'ny fotoana tena mahamety azy mba hamafantsika ny fihetsika manaratsy tena eo amintsika manoloana ny zom-pirenena zakaintsika. Tena tetikasa goavana izy ity.
Chiao Sa dia manasa ny hafa hijery ilay boky noho izy ity nampakatra ny hambom-pom-pirenena tao aminy:
Tsy nampahita tory ahy ny Tsy faly i Sina. Ireo teny avy amina “olona tsy dia manao ahoana” dia niteraka tselatr'afo sy nanaitra ny voamasobeko ary nampihenjana ny hozatro manontolo. Namoha fihetsem-po efa adino tany aloha koa izy ity, “na dia ambany be aza ny momba hy, tsy tokony ho adinoko ny fanahiana momba ny fanaintainan'ny fireneko”.